Banengcindezi yokulanda izidumbu abangcwabi - Ilanga News
Home Izindaba Banengcindezi yokulanda izidumbu abangcwabi
Bacela ukubekezelelwa njengoba isimo sezulu sisibi, nemigwaqo igugulekile
NGUNKZ Nomfundo Mcoyi, weCebolethu Funerals, othi bayazama ukusiza imindeni ehanjelwe yizihlobo.
THANDI ZONDI ABANGCWABI banxusa amalungu omphakathi ukuba ababekezelele kulesi simo esidalwe yizikhukhula ezihlasele iKwaZulu-Natal, esenza kube nzima ukusebenza ngendlela ejwayelekile. Lezi zikhukhula eziqale ngempelasonto, zishiye kukhalwa ezindaweni eziningi, nesibalo sabashonile silokhu sikhule njalo njengoba sesize sadlula ngaphezu kwabantu abawu-100, njengoba abanye bengakatholakali. UMnu Vezokuhle Nala, we-Amathole Funerals, uthi bashayeke kakhulu ekuhambiseni izidingo emphakathini. Uthi eMlazi babhekene nenkinga yokungakwazi ukungena noma ukuphuma ngenxa yemigwaqo elinyazwe yizikhukhula.
“Ngikholwa wukuthi okwamanje sisenemibiko ewuhhafu ngesibalo sabashonile ngoba akukaqedwa ukubhekwa kwabo bonke abantu abathintekile,” kusho yena. Uthi kunemizimba evaleleke ePort Shepstone, abangakwazi ukuyilanda ngoba zonke izindlela zokufinyelela khona zivalekile, ikakhulukazi uma uhamba ngemoto. “Sicela amakhasimende ethu asifonele ukuze sikwazi ukuxhumana nomngcwabi oseduze, ongasisiza lapho esingakwazi ukufinyelela khona. Kasikholwa wukuthi le nkinga esibhekene nayo kuzoba ngeyesikhathi eside. “Kepha sinxusa labo abangakwazi ukuhlehlisa imingcwabo ukuba benze njalo, mhlawumbe kube ngeyesonto elizayo. Amahhovisi omnyango wezasekhaya aseThekwini athintekile, asikwazi ukungcwaba isitifiketi sokushona komuntu singekho,” kusho uMnu Nala.
Uthi ucela nohulumeni ungenelele ubasize ngoba miningi imizimba okumele bayingcwabe. UNkz Nomfundo Mcoyi, weCebolethu Funerals, uthi bayazama ukusiza imindeni ehanjelwe yizihlobo yize kunzima ngenxa yomonakalo odalwe yisimo sezulu. “EHammarsdale nje sibhekane nenkulu inkinga ngenxa yemigwaqo, akuhambeki. Ugesi, umnyango wezasekhaya, ukubhidlika kwemigwaqo kwenza kube nzima ukusebenza. “Izisebenzi zethu zamagatsha ehlukene zithintekile, okwenza kube nzima ukusebenza,” kusho yena. Uthi kwabangakwazi ukuhlehlisa umngcwabo bangenza kanjalo, kanti nomasipala uthi ucele okufanayo ngokubuka isimo senhlabathi.
“Kunzima ukumba emangcwabeni ngoba inhlabathi imanzi, ngisho kwabazimbelayo akuphephile kubona, inhlabathi ivele ivuleke, yenze umgodi omkhulu. Siyacela kumakhasimende ethu ukuba asibekezelele,” kuphetha uNkz Mcoyi. UMnu Muzi Mkhize, weKhayelihle Funeral Services, uthi ukuhamba kukagesi eMgungundlovu, kumise yonke into, kanti abanye abangcwabi bavalile emahhovisi abo. “Izisebenzi kazikwazi ukuya emsebenzini. Ukuyolanda imizimba yabantu abashonile kuyinkinga, kasikwazi ukuthi sithumele izisebenzi ebusuku ngoba kuyingozi ngenxa yemigwaqo ebhodlokayo, engekho esimeni esigculisayo. “Sicela amakhasimende ethu asibekezelele, kodwa sizohluleka sizamile,” kusho uMnu Mkhize.
Previous articleKunyamalale uthisha ‘eyogwazela umhloli’
Next articleKuvuka iminjunju elanda ngokubona abangani ababili bemuka nomfula